युक्रेनमा पुटिनको वास्तविक स्वार्थ के छ ? :: NepalPlus
युक्रेनमा पुटिनको वास्तविक स्वार्थ के छ ?
नेपालप्लस संवाददाता२०७८ फागुन १४ गते २०:५७
रुसी सेना युक्रेनमा प्रवेश गरेको खबरले बिहीवार युरोप अकस्मात जगमगायो । जब भ्लादिमिर पुटिनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेप गर्दा ‘तपाईले कहिल्यै नदेखेको नतिजा निम्त्याउने’ चेतावनी दिए ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले ‘मार्शल ल’ को घोषणा गरे । रसियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडे । युक्रेनसँग देशको रक्षा गर्न लाखौं बलियो सेना रहेको बताए । उनले रुसलाई युक्रेनबाट बाहिर निकाल्न पुटिन विरोधी मोर्चा तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।
युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने वाचा गरेपछि युरोपेली संघका नेताहरूले विहिवार साँझ ब्रसेल्समा भेटघाट गरे । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हप्तौं अघिदेखि सम्भावित आक्रमणको चेतावनी दिंदै आएका थिए । उनले विहीवार पछि जी सेभेन नेताहरूसँग भेट्ने बताएका थिए ।
एस्टोनिया, लात्भिया, लिथुआनिया र पोल्याण्डले नाटोको धारा ४ अन्तर्गत परामर्श गर्न सहमत भए जुन गठबन्धनका सदस्यहरूले गर्न सक्छन् जब उनीहरूले सहयोगीको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रता खतरामा परेको महसुस गर्छन् । सहयोगी नाटो सदस्य नभए पनि त्यो प्रावधान छ ।
सन् २०१४ मा स्वतन्त्रता दाबी गर्ने तथाकथित डोनेट्स्क र लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्रमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूको जनसङ्ख्याको रक्षा गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गरिएको पुटिनले दाबी गरेका छन् । सोमबार पुटिनले औपचारिक रूपमा दुई क्षेत्रको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिए । युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बिहीवार बिहान भने “यो युक्रेनको पूर्वमा मात्र रुसी आक्रमण भएको होइन बरु धेरै दिशाबाट भएको पूर्ण हमला हो।”
तर सोमवारनै पुटिनले युक्रेन र रुस तथा सोभियत संघसँगको सम्बन्धको बारेमा आफ्नै विश्वासको बारेमा अन्तर्दृष्टि दिएका थिए ।
पुटिन युक्रेनको बारेमा के सोच्छन् ?
उनले ४ करोड ४० लाख जनताको स्वतन्त्र राज्य र युरोपको सबैभन्दा ठूलो देश युक्रेन सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिपछि बोल्सेभिकहरूले बनाएको विश्वाश गर्छन् । अहिले कृत्रिम आविष्कार भएको दाबीनै गरे ।
“आधुनिक युक्रेन पूर्णतया रुसले बनाएको हो” उनले भने “लेनिन र उनका सहयोगीहरूले ऐतिहासिक रूपमा रुसी भूमिलाई [विच्छेद] गरे ।”
के सोभियत संघले युक्रेनको ‘आविष्कार’ गरेको थियो ?
युक्रेनियनहरू तर्क गर्छन्, उनीहरूको राज्यको उत्पत्ति एक सहस्राब्दीदेखि भएको हो । त्यो बेला कसैले पनि बोल्सेभिकहरूको बारेमा सुनेका थिएनन् । किइभान रुस’ र ९८८ मा राजकुमार भोलोडिमिरद्वारा ईसाई धर्म स्वीकार गरिएको उनीहरु बताउँछन् । यो राज्य त्यहि बेला उत्पत्ती भएको हो ।
युक्रेनी भाषा र संस्कृतिलाई १९१७ अघिको पछिल्ला अवधिहरूमा दबाइयो । जस्तै जब युक्रेन पोल्याण्ड र जारवादी रूसको प्रभावमा थियो ।
तर पुटिनको दावीको विपरीत सन् १९१७ मा युक्रेनमा थोरै बोल्सेभिकहरू थिए । १९१८ देखि १९२० सम्मको अवधिमा जर्मन सेनाको फिर्ती पछि पूर्ण अराजकताको समय मध्ये एक थियो ।
बोल्शेभिकहरूले यसलाई कब्जा गर्नु अघि त्यहाँ लगभग आठ फरक सरकारहरू थिए । तर पनि तिनीहरूले खार्किभमा राजधानी स्थापना गरे । किनभने कीभ सुरक्षित मानिएको थिएन ।
प्रारम्भिक सोभियत युगमा युक्रेनलाई थप स्वायत्तता दिइएको थियो र युक्रेनी भाषामा प्रतिबन्धहरू हटाइयो ।
डोनेट्स्क र लुहान्स्क किन महत्त्वपूर्ण ?
पुटिनले आफ्नो भाषणमा गरेका दाबीहरूले डोनबासका दुई अलग युक्रेनी क्षेत्रहरू, तथाकथित डोनेट्स्क र लुहान्स्क जन गणतन्त्रहरूको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई लगभग ओझेलमा पारे ।
यसले डुमाद्वारा पुटिनको लागि दुई रूसी-नियन्त्रित क्षेत्रहरूलाई मान्यता दिनको लागि मतदान गर्‍यो जसले २०१४ मा क्रिमिया रूसमा विलय पछि स्वतन्त्रता घोषणा गर्‍यो ।
युक्रेन र पृथकतावादीहरू बीचको युद्धले १४०० जनाको ज्यान लिईसकेको छ । बेलारुसको मिन्स्कमा दुईवटा सम्झौता गर्दै युद्धविरामको बाबजुद त्यति धेरैको ज्यान गएको हो ।
मस्कोले युद्धमा आफ्नो संलग्नता खुला रूपमा स्वीकार गरेको पुटिनको भाषण पहिलो पटक थियो । यस क्षेत्रमा रूसी सैन्य बलहरूमा डुमाको स्वीकृतिले क्रेमलिनको संलग्नताको कुनै पनि व्यावहारिक अस्वीकार्यता समाप्त गर्दछ ।
आठ वर्ष डोनबासमा आफ्नो भूमिकालाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अन्ततः कदम चालेका छन् । आफू संलग्न रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
‘पुटिनका लागि युक्रेन ‘ग्रेटर रुस’ सपनाको अन्तिम टुक्रा हो जसमा बेलारुस पनि समावेश छ’ भन्ने धेरैको भनाई छ ।
तर बेलारुसका शक्तिशाली नेता अलेक्ज्याण्डर लुकाशेन्को घनिष्ठ सहयोगी भए पनि रूस र युक्रेन बीचको तनाव सन् १९९१ मा यसको स्वतन्त्रता पछि प्रायः चिसिंदै आएको हो । सन् २०१४ मा क्रिमियाको विलय पछि चरम सीमामा पुग्यो ।
युक्रेनको इतिहासको बारेमा उनको दावीहरू युरोपभरि ऐतिहासिक संशोधनवादको फराकिलो प्रवृत्तिको हिस्सा भनेर मानिंदै आईयो । किनभने दक्षिणपन्थी सरकारहरू र आन्दोलनहरूले नयाँ राजनीतिक कथाहरू बनाएर त्यो समर्थनलाई अझ बलियो बनाउन इतिहासको पुन: व्याख्या गरेको भनिन्छ ।
तर व्यावहारिक रुपमा आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पुटिनको सबैभन्दा ठूलो शत्रु नाटो देखियो । रुले आफ्नो प्रभावको क्षेत्र मानेको यसको पूर्वमा विस्तार भएको छ नाटो जसले गर्दा रुसलाई उत्तेजित र सशंकित पार्‍यो ।
पुटिनले हस्ताक्षरित सम्झौतामा नाटोको गैर-विस्तारलाई औपचारिकता दिइने कुरामा जोड दिएका छन् । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले यस सम्झौतामा रोमानिया र बुल्गेरिया गठबन्धनबाट बाहिरिने कुरालाई पनि समावेश गर्न सक्ने बताएका छन् ।
पुटिनले आफ्नो प्रभावित पूर्वको क्षेत्रमा नाटोको गैर-विस्तारलाई औपचारिकता दिईनुपर्छ र त्यो लिखित संझौता पालना हुनुपर्छ भनेका छन् । अर्थात् युक्रेनसित पहिलेनै नाटोमा सामेल नहुने संझौता भएको र त्यो पालना हुनुपर्ने भनाई पुटिनको छ ।
पुटिनलाई कसको समर्थन ?
अहिलेसम्म क्युबा, भेनेजुएला, निकारागुआ र सिरियाले मात्र लुहान्स्क र डोनेस्कमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू रुसी स्वतन्त्रताको मान्यतालाई खुलेर समर्थन गरेका छन् । रुसको पछिल्लो कदममा चीन र भारत तटस्थ छन् । तर इयुका हंगेरी लगायतका केहि देशले खुलेर नगरेपनि रुसको समर्थन गरेका छन् ।
युरोपेली संघले बुधबार राति पूर्ण सूची घोषणा गर्दै लाभरोभ र रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगु जस्ता रुसी राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाएको घोषणा गर्‍यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसको सार्वभौम ऋण र प्रमुख वित्तीय संस्थाका साथै देशका कुलीन वर्ग र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरेर अझ व्यापक प्रतिबन्धहरू जारी गरे ।
जर्मनीले पनि नोर्ड स्ट्रीम २ पाईप लाईनको स्वीकृति रोक्यो । १० अर्ब युरो रूसी-स्वामित्वको पाइपलाइन परियोजनालाई अनिश्चितकालका लागि रोकेको घोषणा गर्‍यो ।